Utyando lwePlastiki ngokubunjwa kwempumlo
I-Rhinoplasty, okanye utyando ukutshintsha isimo sempumlo, yenye yeendlela eziqhelekileyo zokuhlinzwa. I-Rhinoplasty inokunciphisa ubukhulu bempumlo, utshintshe umlo wesipoti okanye ibhuloho ukuze unciphise okanye ukhulise amacenge, okanye utshintshe i-angle phakathi kwempumlo kunye nomlomo ophezulu. Utyando lwePlastiki ekwakhekeni kwempumlo lungalungisa iziphene zokuzalwa okanye izikrakra, kwanokuba kunciphise ukuphefumula. Ukuba ufuna ukwenza i-rhinoplasty, le ngcaciso iya kukunika ulwazi olusisiseko lwenkqubo - xa lunceda, njani lwenziwa kwaye yintoni ekumele ikulindele.
Ngubani ofuna i-rhinoplasty?
Utyando lwePlastiki ekwakhekeni kwempumlo lunokuphucula imbonakalo yakho kwaye luthembele, kodwa aluyi kubakhokelela ekuphumeleleni kweyona nto kwaye ayiyi kutshintsha isimo sengqondo kubantu. Ngaphambi kokuthatha isigqibo malunga nokusebenza, qwa lasela ngokulindelekileyo kwaye uxoxe nabo nodokotela wakho ogqirha.
Abagqwesileyo abagqwesileyo kwi-rhinoplasty ngabantu bafuna ukuphucula, kungekhona ukufezeka kwindlela yabo yokubonakala. Ukuba unempilweni, uzinze ngokwengqondo kwaye uqiniseke ngokuqinisekileyo malunga nokulindela kwakho, mhlawumbi udibana nale nxaxheba.
I-Rhinoplasty ingenziwa ngeenjongo zobugcisa okanye izixhobo zokuvuselela, njengeziphoso zokuzalwa okanye iingxaki zokuphefumla. Ubudala bubalulekile. Amagqirha amaninzi anqwenela ukusebenzisana nabaselula ukuya ekupheleni kobuntwaba-malunga neminyaka eyi-14-15. Kancinci kwangaphambili kumantombazana kunye kamva kamva kubafana.
Nayiphi na ingenelelo yokungcakaza iyingozi!
Xa lo msebenzi uqhutywe ngugqirha ogqithisiweyo weplastiki, iingxaki aziqabile kwaye kaninzi azibalulekanga. Unokunciphisa umngcipheko, ulandela imiyalelo kadokotela wakho, kokubili nangaphambi kokusebenza.
Emva kokusebenza, ukuqubuka kwe-capillary encinci ngendlela yamacwecwe obomvu kwiphepha, kuya kubonakala kuncinci, kodwa kunokuhlala ngonaphakade. Kwiimeko ezilishumi kwiimeko ezilishumi, inkqubo yokuphindaphinda iyadingeka ukulungisa ukukhubazeka kwamancinci. Amatyala anjalo awanakwenzeka kwaye akwenzeke nakwizigulane ezisezandleni zabagqirha abanamava. Ukulungiswa kwemisebenzi, njengommiselo, awubalulekanga.
Konke kuhamba ngocwangciso
Ubunxibelelwano obuhle phakathi kwakho kunye nodokotela wakho ogqirha kubaluleke kakhulu. Ekuboniswaneni kokuqala, ugqirha kufuneka ucele ukuba ufuna njani impumlo yakho ukuba ibhangele, hlalutya isakhiwo sempumlo kunye nobuso kwaye uxoxe nawe ngamathuba. Uya kuchaza izinto ezinokuchaphazela inkqubo kunye neziphumo. Ezi zinto zibandakanya isakhiwo samathambo kunye ne-cartilage yeempumlo, isimo sombuso, ukubunjwa kwesikhumba, ubudala kunye nokulindela.
Ugqirha wakho uya kuchazela nawe iindlela ze-anesthesia eziya kusetyenziswa ekusebenzeni, iingozi kunye neendleko ezihambelana nale nto, kunye nantoni na onokukhethayo. Uninzi lwemigaqo-inshorensi ayigubungele zonke iindleko zokuhlinzwa, kodwa, ukuba inkqubo yenziwa ngenjongo yokulungisa kwakhona ingxaki yokuphefumula okanye ukungahambi kakuhle, iyakucetyiswa yinkampani yinshuwalense.
Qiniseka ukuxelela ugqirha wakho ukuba uphezulu lwangaphambili lwempumlo okanye unobungozi obukhulu, nangona kwenzeka iminyaka emininzi edlulileyo. Kufuneka umxelele nokuba unesifo sokuphefumula okanye ukuphefumula okufutshane xa uthabatha imithi, iivithamini kunye neyeza zokubuyisela okanye ukuba utshaya. Unganqikazi ukubuza ugqirha wakho malunga nayo yonke into ekuthandayo - malunga nokulindela nokukhathazeka malunga neziphumo.
Ugqirha wakho uya kukunika imiyalelo ecacileyo malunga nendlela yokulungiselela ukusetyenziswa, kuquka neengcebiso zokusondeza, ukusela, ukutshaya, ukuthatha okanye ukumisa iivithamini ezithile kunye namayeza, kwaye uhlambe ubuso bakho. Yilandela ngokucophelela le miyalelo ukuvumela ukuba umsebenzi uphumelele ngokugqithiseleyo. Ngaphambi koko, cela umntu kwiintsapho zakho ukuba akuyise ekhaya emva kokusebenza kwaye anike uncedo kwiintsuku ezimbalwa.
Umsebenzi weplastiki ngendlela yempumlo ingenziwa phantsi kwe-anesthesia yendawo okanye jikelele, kuxhomekeke kubude benkqubo kunye nento wena kunye nodokotela wakho ophatha ngayo. Ukuba phantsi kwe-anesthesia yendawo, uya kuziva ukhululekile, kwaye impumlo kunye nommandla ojikeleze kuyo iya kuba yincinci. Uza kuphaphama ngexesha lenkqubo, kodwa ungaziva uhlungu. Ukuba une-anesthetic jikelele, uya kulala ngexesha lokusebenza.
I-Rhinoplasty idla iyure okanye ezimbini, nangona iinkqubo ezinzima kakhulu zinokuhlala ixesha elide. Ngethuba lokuhlinzwa, ulusu lwempumlo luhlukaniswe kwisakhiwo esisekelwe kumathambo kunye neengqungquthela, ezinikezelwa ngokokulo. Indlela yokwakheka kwempumlo ixhomekeke kwinqanaba lokuxakeka kwengxaki yakho kunye nendlela ekhethiweyo yomsebenzi wovulindlela. Ekugqibeleni, ulusu lubuyiselwa kwisakhiwo samathambo kunye nemigangatho ye-seams.
Amathambo amaninzi aseplastiki enza i-rhinoplasty ngaphakathi kwempumlo, enza i-slot ngaphakathi kwamakha. Abanye bakhetha inqubo evulekile, ingakumbi kwiimeko ezilukhuni, benza inkcazelo encinane emaphethelweni empumeni kwindawo yokuhlukana kwamakha.
Xa uphelile ukusebenza, uza kufaka itshani elincinci ekhaleni lakho ukuze ugcine uhlobo olutsha. Iingxowa ze-nasal okanye iiplastiki ezithambileyo zingabuye zibekwe emakhaleni ukuze zizinze ulwahlulo lwengxenye phakathi kweendlela ezimbini zomoya.
Kwixesha elide emva kokusebenza - ngokukodwa ngaphakathi kweeyure ezingama-24 zokuqala - ubuso bakho buya kuvuvukala, impumlo ingakulimaza kwaye mhlawumbi kuya kuba nekhanda. Oku kunokulawulwa ngeentlungu ezichazwe ngumgqirha wakho. Zama ukulala embhedeni ngaphandle kokuhambisa intloko yakho ubuncinane ngosuku lokuqala.
Okokuqala uza kubona ukuba ukuvuvukala nokuvuvukala empumeni kuya kukhula kwaye kufinyelele kwinqanaba layo emva kweentsuku ezimbini okanye ezintathu. Ukunyanzeliswa kwamanzi kuya kunciphisa iindawo ezikhutshiwe kwaye kukuvumela ukuba uzive ungcono. Kwimeko nayiphi na into, uya kuziva ungcono kunokuba ubonakala. Isisu kufuneka sipheleke kwiiveki ezimbini. Ngamanye amaxesha oku kuthatha malunga nenyanga.
Ngamanye amaxesha kunokuba kube negalelo elincinci ukusuka ekhaleni ngexesha leentsuku zokuqala emva kokusebenza (okuqhelekileyo) kwaye unokuvakalelwa kukuphefumula ixesha elide. Ugqirha wakho uya kucela ukuba ungaqhubeki iphunga lakho ngeveki ngelixa izicubu ziphilisa.
Ukuba unemiphakati yomzimba, ziya kususwa emva kweentsuku ezimbalwa kwaye uya kuziva ukhululekile ngakumbi. Ekupheleni kweyokuqala okanye, ngokungafanekiyo, iveki yesibini, zonke ii-patches, imichilo kunye nemicu iya kususwa.
Buyela kwi siqhelo
Uninzi lwezigulane ezenza uphando lweplastiki ngendlela yeempumlo zikhutshwa esibhedlele ngosuku lwesibini, kwaye emva kweveki zibuyela emsebenzini okanye zifundwe. Kodwa kuthatha iiveki ezimbalwa ukubuyela kwimpilo evamile.
Udokotela wakho ogqirha uya kunika iingcebiso ezithile ngokubuyela ngokukhawuleza kumsebenzi oqhelekileyo. Oku kuya kubandakanywa: ukuphepha yonke into esebenzayo (ukugijima, ukubhukuda, isondo - nayiphi na into ephakamisa uxinzelelo lwegazi) kwiiveki ezingama-2-3. Qaphela xa uhlamba ubuso bakho neenwele, okanye xa usebenzisa izimonyo. Unokugqoka iilensi zokudibanisa ukuba uziva ukuba awukwazi ukugqoka iilazi ngoku. Mhlawumbi emva kokutshintsha isimo sempumlo, ukubonakala kwakho kwiiglasi kuya kutshintsha. Udokotela wakho ugqirha uza kumtyelela rhoqo kwiinyanga eziliqela emva kokusebenza ukujonga inkqubo yokuphilisa. Ukuba kukho naziphi iimpawu ezingavumelekanga zenzeka ngeli xesha, cela imibuzo yakho ugqirha malunga noko ungakwenza kwaye unako ukwenza. Unganqikazi ukubiza udokotela.
Ukujonga kwakho entsha
Kwiintsuku zokuqala emva kokuhlinzwa, i-UVass iya kuhlala isifo sokuvuvukala, apho kunzima ukukholelwa ukuba uya kubonakala ngcono. Enyanisweni, izigulane ezininzi ziziva zixinezelekile ixesha elithile emva kokuhlinzwa kweplastiki - oku kuqhelekileyo kwaye kuyaqondakala. Oogqirha baqinisekisa ukuba esi sigaba siya kudlula. Usuku emva kwempumlo yakho iya kuqalisa ukubonakala ilungile kwaye ibhetele, kwaye isimo sakho sengqondo siya kuphucula, iingxaki ziya kupheliswa. Ngeveki okanye ezimbini, akukho mntu uya kuthi, ekhangele kuwe, ukuba usebenze nje.
Nangona kunjalo, inkqubo yokuphucula ihamba kwaye ihamba kancane. Ukuvuvukala okuncinci kuphela kuya kuqhubeka kwiinyanga eziliqela, ingakumbi kwiphondo lempumlo. Iziphumo zokugqibela ze-rhinoplasty ziya kucaca kuphela emva konyaka.
Okwangoku, unokuzijonga ngendlela engalindelekanga kwiintsapho kunye nabahlobo. Bathi bangaboni umehluko omkhulu kumbongo wempumlo. Okanye kunokuba nomsindo, ngakumbi xa utshintsha into echazwe ngabo njengentsapho. Ukuba oko kwenzeka, zama ukucinga nje ngento eyenza ukuba uthathe le nyathelo. Ukuba ufezekise injongo yakho, ukuhlinzwa ngoplastiki kwaphumelela.
Amacube ebusweni: zokupheka kwabantu
Indlela yokujonga kakuhle emva kweqela
Izixhobo zokuqala. Ngaba kunokwenzeka ukujongana nabantu abadala?
Shish kebab evela kwinkukhu e-multivarka
I-Biography yomdlali weDmitry Dyuzhev
Indlela yokuxhobisa indlu ye studio: iibhodi ezintathu ezivela kubaqulunqi
Isibindi sebhaka yengulube